Dagaalameyaal Al-Shabaab ah oo weerar gaadmo ah lagu khaarijiyey
Maleeyshiyaadkana ayaa weerar jidgal ah ku qaadey kolanyo ciidan kahor inta aan lagu dilin iska hor-imaad.
NAIROBI, Kenya – Ciidamada Kenya ayaa sheegay in ay dileen shan Al-Shabaab kadib markii xubno ka tirsan argagixisada ay ismaamulka Mandera gaar ahaan meel ku dhow xuduudka ku kadiyeen kolanyo milatari.
Sidda laga soo xigtay goobjoogeyaal, kolanyada oo isaga kala goosheysay wadada Lafey - Alungu – Elwak ayaa la beegsaday aroortii Isniintii.
Warbixin kasoo baxdey booliska ayaa lagu sheegay in hal mas'uul dhanka amniga uu ku naf-waayay falka, laba kale ay dhaawacyo soo gaareen.
Sarkaal sarre oo booliska ka tirsan ayaa wariyey in dhimashada ay korortay, isagoo intaas ku daray in bukaanadda loola caray xarumaha caafimaadka.
"Shan Al-Shabaab ah baan dilnay, tiro kalena waan dhaawacmay intii uu socday dagaalka fool ka foolka ah," ayuu hadalkiisa ku daray sarkaalka.
Kolanyada la beegsaday ayaa kusii jeeday garoon diyaaradeed xilliga la beegsanayey. Dadku waxay sheegeen in xabadu socotay 30 daqiiqo.
Xoogaga hubeysan ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa bam-gacmeedyo iyo qoryo fudud u adeegsaday weerarka. Xuduudka Soomaaliya iyo Kenya waxaa ku baxdey dhacdooyinkan oo kale, wallow ay jiraan roondooyin.